Dowladda Soomaaliya oo la wareegtay Xogta macdanta dalka ku jirta oo ay gacanta ku heysay shirkadda SKA – Hornafrik Media Network
Dowladda Soomaaliya oo la wareegtay Xogta macdanta dalka ku jirta oo ay gacanta ku heysay shirkadda SKA
By Liibaan Nuur	 Last updated Mar 25, 2019
Muqdisho (Hornafrik):- Dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay Xogta macdanta dalka ku jirta oo muhiimad gaar ah u leh Kheyraadka dabiiciga ee dalka,waxaana baarista xogtan sameeyay quburo kala duwan oo dalka Britain ka soo jeeda.
Madaxa Shirkadda SKA ee Xogtan soo iibsatay oo sharaxaad ka bixiyay baarista ayaa sheegay in dhul badan oo Soomaaliya ka tirsan ay ka jiraan macdan, Saliid , Gaas,shidaal,dheyman iyo dahab iyo waxyaabo kale oo muhiim ah.
“ Tani waaa tallaabo cusub,waxaan u arkeynaa iney Soomaaliya ka jiraan fursado aad u fiican ee dhinacyada horumarinta kheyraadka macdanta ee dalka,waxay keeneysaa arrintaan in dalka Soomaaliya uu helo maalgashigii loo baahnaa,taasi oo fursad u noqoneysa oo shaqo abuur ah u noqoneysa shacabka Soomaaliyeed,waxayna shacabka noqonayaan kuwo ku noolaado nolol barwaaqo leh,” ayuu yiri madaxa Shirkadda SKA.
Sidoo kale,waxaa la daah-furay mashruuc shirkadda (SMMG),ku maalgelineyso Macdanta Soomaaliya.
“Waxaan ammaaneynaa shirkadda dadaalka ay u gashay iney nagu wareejiso macluumaadkan qaaliga ah ee wadanka uu leeyahay,waxaana soo dhoweyneynaa cid kasta oo maalgashaneysa Soomaaliya dhinaca kheyraadkeeda,” ayuu yiri Wasiirka Batroolka Soomaaliya.
Ugu dambeyn,Wasiirka Wasaaradda Batroolka Soomaaliya ayaa sidoo kale soo dhoweeyay daah-furka shirkada cusub ee (SMMG).
Gantaallo lagu weeraray Israa’iil oo dhaliyay dhaawacyo 7-ruux ah